Isiginali: Xhumana nge-SMS, i-imeyili, i-Twitter kanye ne-Facebook | Martech Zone
Isiginali: Xhumana nge-SMS, i-imeyili, i-Twitter kanye ne-Facebook
NgoLwesihlanu, Septhemba 6, 2013 NgoMsombuluko, Januwari 16, 2017 Douglas Karr
Isignali iyi-platform edidiyelwe yamabhizinisi ukuphatha, ukuqapha nokukala imizamo yabo yokumaketha kuziteshi zamaselula, zenhlalo, ze-imeyili nezewebhu. Ngokuyisisekelo, ukumaketha kweCRM + ukumaketha kwe-imeyili + ukuphathwa kwemidiya yezenhlalo.
Sikholelwa ukuthi umsebenzi womthengisi usuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ngenxa yokwanda okusheshayo kweziteshi zokumaketha, namathuluzi okuphatha. Isoftware yethu isiza izinkampani ukuphatha kalula imizamo yazo yokumaketha endaweni eyodwa emaphakathi ngenkathi zinikeza isifinyezo esihlanganisiwe samakhasimende abo.
Izindawo ezibalulekile zepulatifomu yeSiginali yilezi:
Dashboard - Letha konke ukumaketha kwakho nemisebenzi ndawonye kudeshibhodi eyodwa, ugweme ukugcina amasistimu amaningi esoftware.
Ukuphatha oxhumana nabo - Hlela bonke oxhumana nabo bokumaketha ku-database eyodwa yokumaketha emaphakathi.
Izincwadi Ze-imeyili - Khetha kusuka kulabhulali yabo yamathempulethi we-imeyili akhelwe kusengaphambilini ukuze usebenzise i-as-is noma wenze ngendlela oyithandayo.
Ukuthumela imiyalezo - Thumela izaziso zomuntu siqu, ezizwela isikhathi.
Ukushicilelwa Komphakathi - Thumela izibuyekezo ku-Facebook naku-Twitter, hlela ukubuyekezwa kokulethwa kwesikhathi esizayo futhi unciphise ama-URL wokuchofoza okungalandeleka.
Ukuqapha Komphakathi - Phatha amanethiwekhi amaningi wezokuxhumana kudeshibhodi eyodwa, landela abalandeli bakho nabalandeli futhi ubheke izingxoxo kumanethiwekhi omphakathi.
Amakhasi okufika - Dala amakhasi e-mobile-optimized, customing landing namafomu wokungena. Phromotha ngomyalezo obhaliwe, i-imeyili noma amanethiwekhi omphakathi.
Amakhuphoni - Dala amakhuphoni wewebhu noma asobala ongawasabalalisa ngomyalezo wombhalo, i-imeyili noma imithombo yezokuxhumana.
Phatha Izindawo - I-imeyili yendawo eqondisiwe eqondiswe endaweni ethile kanye nemibhalo - futhi inikeze ukufinyelela kuma-franchisees.
Ama-Analytics - Thola ukuqonda okujulile kokumaketha ngombono ohlanganisiwe wamakhasimende akho.
Isignali izifanekiso zamakhasi we-imeyili nokufika zingenziwa ngezifiso ngokuphelele. Isiginali nayo inamandla amakhulu API ukuhlanganiswa kwezinhlelo zezinkampani zangaphandle. Futhi iSiginali yakhelwe phezu kwayo futhi inikela kuyo umthombo ovulekile, kanjalo!
Tags: Ama-Analyticsamakhuphoniimeyili Marketingfranchiseamakhasi okufikaukumaketha okususelwa endaweniamakhasi okufika eselulaAmakhodi we-QRisignaliSMSukumaketha komphakathiimiyalezo